I Simôna Petera na Simona Piera dia iray amin'ireo mpianatr'i Jesosy roa ambin'ny folo lahy. Hafohezina amin'ny hoe Petera na Piera fotsiny io anarana io matetika. Jiosy na Jody avy any Betsaida any Galilea i Petera. Μpanjono no asany. Araka ny lovantsofina dia izy no nanoratra ny Epistily voalohany sy faharoan'i Petera. Ny lovantsofina katolika koa dia manao azy ho ilay nanorina ny Eglizy katolika voalohany sy papa voalohany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Petera&oldid=1037545"
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2021 amin'ny 18:44 ity pejy ity.